Ciyaartee ayay ahayd middii loogu daawashada badnaa dhammaan Horyaallada kala duwan ee Qaaradda Yurub? – Gool FM
Ciyaartee ayay ahayd middii loogu daawashada badnaa dhammaan Horyaallada kala duwan ee Qaaradda Yurub?
(Barcelona), 27 Okt 2016 –Iyadoo farqi weyn uu u dhexeeyo sida Taageerayaashu u soo xaadiraan garoommada kala duwan ee Horyaallada kubadda cagta Qaaradda Yurub oo ay ugu culus yihiin; Bundesliga, Premier League, La Liga, Serie A iyo Ligue 1, ayaa haddana waxaa jira garoon ay u soo daawasho tageen Jamaahiirtii ugu badneyd ee kulan ciyaareed fiirsata xilli ciyaareedkan.
Horyaallada Jarmalka iyo Ingiriiska ayaa noqday labada Horyaal ee garoommadooda Kubadda cagta si weyn loo soo camiro waxaana buuxidda garoomadaasi xilli ciyaareedkan 2016/17 lagu qiyaasay 92%, iyadoo isu geynta taageerayaasha labadaasi Horyaal soo galay ilaa iyo haatan ay gaareen 3.2 Milyan oo ruux.
Horyaalka Spain ee La Liga ayaa galay kaalinta 3-aad ee xagga dadweynaha yimaada garoommada ciyaaraha iyadoo 72% garoomadaasi la soo galo, Ligue 1 (62%) iyo Serie A (55%).
Dhinaca kale kulankii Barcelona iyo Atletico Madrid ku dhex maray garoonka Camp Nou, 21 September ayaa la diiwaan geliyay inuu ahaa kulankii ugu daawashada badnaa dhammaan ciyaaraha Horyaallada kala duwan ee Qaaradda Yurub xilli ciyaareedkan, waxaana daawaday 89,421 qofood.
WAR CUSUB: Mesut Ozil oo wada hadalo qarsoodi ah la yeeshay kooxdan......